OPDO/ODP dha!Torban torbanii cinaacha garagalfatu! - Kichuu
HomeAfaan OromooNews OPDO/ODP dha!Torban torbanii cinaacha garagalfatu!
OPDO/ODP dha!Torban torbanii cinaacha garagalfatu!
Torban torbanii cinaacha garagalfatu!
Warraaqsi hudhee qabnaan, OPDO uummatni bakka maratti of keessaa haxaa’uu eegallaan “nuti OPDO miti, ODP dha!” Nuun jedhan. Maqaa jijjiiratanii akka waan sirna jijjiiranitti nu sobuu yaallan irratti barre. Achumaan amma immoo deebisanii “nuti ODP miti paartii badhaadhinaa PP dha” nuun jedhan. Sunis humaa isaanii fudhatamuu dhiifnaan ammoo waan argaa jirtan kanaan dhufaa jiru.
Hubadhaa! Lolli keenya lola Oromiyaa fi Xoophiyaati. Humnoota Xoophiyummaa leellisaniif humnoota Oromiyaa dhabamsiisuu barbaadantu cinaacha galagalchaa bula. Isaan kun namoota nuti Oromoodha jedhan kan haadhaan, ykn abbaan akkasuma haadha manaan Amaara ta’an guutuutti of keessaa qaba.
Sanyii hinmakin! Qabsookees itti fufii Oromiyaa ijaarradhu. Diraamaa kana hindhaga’in. Akkuma ABO taatee du’aa, dhiigaa, lafee cabaa turte hanga dhuma Bilisummaatti ABO ta’ii qabsaa’i. Santu Oromoo fi Oromiyaa jiraachisa. Qaamni ABO jibbu martuu diina Oromiyaati. Kana hubachuu nu feesisa
Warrii kaleessa dhiiga sabaa dhangaalaasaa ture hundi isaanii jijirama tokkoon maleetti hardhas aangooma San irra taa’aanii, gaafii gaafatamaniif Jawaar isiiniif haa deebisu deebii jedhu Kan nuuf deebisaniidha.FILMAATNI DHUFAA JIRA , isaan OPDO guutuu oromiyaa keessaa dhabamsiisuu ni dandeenyaatii jabaadha.
ODM-BREAKING NEWS-የብልጽግና ፓርት በምርጫ ቦርድ ሳይመዘገብ የ2020 ምርጫን ኣሸነፈ-Big Shame for Ethiopia, 2019 https://t.co/OJWBTbN6na pic.twitter.com/rPQIakuKOU
— Kichuu (@kichuu24) December 17, 2019
Breaking News-በኮሎነል ኣብይ ኣህመድ ኣምባገነንነት የተፍጠረው ብልጥግና ፓርት ባይ ኣፎሻ በኦሮምያ ክልል በሙሉ ተቃዎሞ ገጠመዎታል:: ህዝቡም በኣንድ ዲምጽ ምርጫችን ኦነግ ብቻና ብቻ ነው ብሏል, 2019 https://t.co/UfZjHyDXSx pic.twitter.com/XypDuaZNe9
Breaking News-በኮሎነል ኣብይ ኣህመድ ኣምባገነንነት የተፍጠረው ብልጥግና ፓርት ባይ ኣፎሻ በኦሮምያ ክልል በሙሉ ተቃዎሞ ገጠመዎታል:: ህዝቡም በኣንድ ዲምጽ ምርጫችን ኦነግ ብቻና ብቻ ነው ብሏል, 2019
ሰበር ዜና: አስተዋዩና የኦሮሞ ምዕመናንን አደራ የማይበላው ቁም ነገረኛው አባት ቄሲሰ በላይ መኮንን